Ireo Blaoginà Literatiora Tsara Indrindra Tamin’ny 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2018 17:22 GMT
Ny nahazo ny loka andiany voalohany dia ny Ánima dispersa, nosoratan'ny mpanoratra Meksikana iray, Alberto Chimal. Io no veloma tsara indrindra ho an'io blaogy io, izay nitsahatra tamin'ny volana Desambra 2005 ny fanavaozana azy. Nisokatra niaraka tamina blaogy vaovao i Chimal tamin'ny 2006, Las historias, tena natokana manontolo ho an'ireo tantara fohy.
Ny Enigmatario no faharoa be mpifidy indrindra, izay manoritsoritra ny vaovao mikasika ny fijery somary tsy dia mahazatra loatra.
Ny El Lamento de Portnoy no nahazo ny loka fahatelo. Aza adino ity blaogy Espaniola tsara indrindra ity, izay manasongadina ireo fanehoankevitra lalina sy ireo kiana am-pisainana mikasika an'ireo sarimihitseika sy ireo tantara ankehitriny.